Qalabka kaabayaasha ugu weyn ee qodista iyo buufin soosaarka waa foornada madaxa nadiifisa. Ka dib markii la soo saaro muddo waqti ah, cilado wasakhda daloolka ah ayaa dhici doonta. Waqtigaan, waxaa lagama maarmaan ah in la beddelo mudista dillaacday oo dhinta. Bedelka cirbadaha ee madaxa dhinta wuxuu u baahan yahay in shaqada laga eryo si meesha looga saaro inta ku jirta polymer iyo nijaasta ku jirta madaxa dhinta. Mashiinka daboolka iyo lafdhabarta ayaa sida caadiga ah loo dubay si meesha looga saaro hadhaaga birta ah iyo nijaasta. Iyo sheyga ceyriinka ah ee qadka wax soo saarka dhalada dhalaalaya, guud ahaan, dadku waxay adeegsadaan PP. Hadal ahaan arag ahaan, kuleylka (heerkulka sare, dhalaalista heerkulka hooseeya) polymer goynta waxyaabaha ceyriinka ah ayaa loo isticmaali karaa dhalaalida iyo buufinta. Polypropylene waa mid ka mid ah walxaha goynta ugu badan loo adeegsado habka buufinta dhalaalid. Intaas waxaa sii dheer, walxaha sida caadiga ah loo isticmaalo goynta miraha lagu buufiyo waxaa ka mid ah polyester, polyamide, polyethylene, Teflon, polystyrene, PBT, EMA, EVA iyo wixii la mid ah. Nooca polymer-ka ayaa go'aamiya barta dhalaalkeeda iyo astaamaha rheological. Walxaha walxaha polymer-ka ah ee loo yaqaan 'polymer' wax walbo oo cayriin ah, waxaa jira qaab u dhigma iyo habka lagu buufiyo, sida heerkulka kuleylka, cabirka dhererka qiyaasta dhexroorkiisa, qaabka mashiinka, habka qalajinta ceyriinka iyo wixii la mid ah.
Waxaana jira waxyaabo badan oo saameyn ku yeelan kara tayada dharka dunta dhalaalaya. Waxqabadka dhalaalaya iyo waxyaabaha lagu buufiyo ayaa inta badan loola jeedaa astaamaha muuqaalka jirka iyo farsamada, sida xoogga waxsoosaarka, hawada oo dhan, dhexroorka fiber, iwm, iyadoo ay ugu wacan tahay habka dhalaalaya ee adag iyo buufinta, waxaa jira arrimo saameyn badan leh. Cabirrada waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo baahida loo qabo habka dhalaalinta wax soo saarka buufinka, sida qaddarka fidinta dhalaalida, heerkulka dhalaalaya, heerkulka iyo xawaaraha bilowga ah ee hawada fidsan, fogaanta heleysa iyo wixii la mid ah.